Rabshado ka dhacay gobolka Katalooniya ee dalka Spain - BBC News Somali
Rabshado ka dhacay gobolka Katalooniya ee dalka Spain
Magaalada Barcelona rabshado ka dhacay ayaa waxaa ku dhaawcmay 24 qof, waxaana boolisku ay dadkani ku kala eryayeen rasaas ay cirka u ridayeen.
Dad careysan oo dibadbaxyo dhigaya ayaa isugu soo baxay waddooyinka kaddib markii garsooraha maxkamadda ugu sarreysa dalka Spain uu amray in 25 ka mid ah hoggaamiyeyaasha Kataloniya loo maxkamadeeyo fallaaganimo, xatooyo iyo in ay diideen in ay u hoggaansamaan awaamiirta dowladda, eedeymahaasi oo qofkii lagu helo uu muteysanayo ilaa 30 sano oo xarig ah.
Dhammaan siyaasiintani ayaa waxa ay beeniyeen eedeymahani loo soo jeediyay.
Qareenka u doodaya laba ka mid ah siyaasiinta lagu eedeynayo fallaaganimada ayaa sheegay in xarigga loo geysanaya siyaasiintani uu yahay iskuday la doonayo in cagta lagu mariyo dadka u ololeynayo madaxbannaanida.
Mid ka mid ah siyaasiinta hadda la soo eedeeyay Marta Rovira, ayaa isla markiiba dalka ka baxay waxa uuna ku biiray shan kale oo kal horeba dibad joog ahaa.
Balse siyaasiin kale oo shan ah ayaa xabsiga la dhigay waxaana ku jira Jordi Turull oo xisbiyada gooni u goosadka ay u doorteen madaxweynaha maamul goboleedka Katalooniya.
Garsooraha maxkamadda ayaa sidoo kale waxa uu waraaqdii lagu soo xiri lahaa u jaray siyaasiin uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Katalooniya Carles Puigdemont oo dalka Belgiumka musaafuris ahaan ugu maqan.